समाचार Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काजिशले खै के के भने ‘मनपरेको शुरमा’ करिष्मा र सवुलाई (भिडियो सहित)
काठमाडौं । पछयौरी म्युजिक प्रालीको प्र्रस्तुतिमा युवा गायक कृष्ण लामिछानेको पहिलो लोकदोहोरी ‘मन परेको सुरमा’ बोलको मार्मिक लोकदोहोरी गीत म्युजिक नेपाल मार्फत बजारमा आएको छ । नयाँ पुस्ता मा राम्रो आवा...
हरिणको शिकार गर्दा गाउँलेलाई बन्दुक देखाएर भागेका थिए सलमान
काठमाडौं । हिन्दुस्तान पत्रिकामा छापिएको खबर अनुसार सलमान खानले सिकार खेलेको गाउँवासीले देखेका थिए तर उनले उनीहरूलाई बन्दुक देखाएर भागेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीको भनाइमा आधारित खबरमा सो पत्रिकाले लेखेक...
कालो हरिण शिकारको मुद्दामा सलमान खानलाई पाँच वर्ष जेल सजाय
बिहिबार, चैत्र २२, २०७४
काठमाडौं । भारतको एक अदालतले बलिउडका सबभन्दा चर्चित मध्येका एक अभिनेता सलमान खानलाई २० वर्ष अगाडि दुर्लभ वन्यजन्तुको सिकार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय तोकिदिएको छ। ‘हम साथ साथ है...
सचिनकी प्रेमिका बनिन् स्वस्तिमा खड्का (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ। आधुनिक पप विधामा स्थान बनाईरहेका गायक टेकन दाहालको स्वरमा रहेको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘तिमीबाटड बोलको यस गीतमा शब्द तथा संगीत कमल खत्रीको रहेको छ । भिडियोमा नायिका स्वस्तिमा...
कालो हरिण शिकारको आरोपमा सलमान खान दोषी ठहर
एजेन्सी । भारतको एउटा अदालतले बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानलाई सन् १९९८ मा दुर्लभ जनावरको सिकार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। खानले दुइटा कालो हरिणलाई फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ को छायाङ्कनका क्रमम...
दिलरानीमा जम्यो उदित र सेलिनाको जोडी (भिडियो सहित)
गायक उदितनारायण झा र गायिका सेलिना कुँवरको जोडी निकै जमेको छ । फिल्म नेप्टेको ‘ दिलरानी’ गीतले अहिले चर्चा कमाइरहेको छ । यहि चैत्र ३० गते रिलिज हुने नेप्टेको दिलरानी गीतमा झा र कुँवरको स्वर रहेको छ ।...
सुरेश परियारको “त्यसै होइननी ” गीतकाे भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौ ।संगित क्षेत्र भित्रका विभिन्न आयामहरु मध्ये लोकदोहोरी गीतको क्षेत्रपनि अपार प्रकारको रहेको छ । अमुल्य म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतिमा गायक सुरेश परियार , जुना श्री , र सुर्य परियारको आवाजमा रहेक...
के कालो हिरण शिकारको आरोपमा सलमानलाई सजाय दिइनेछ ?
काठमाडौं । लगभग १९ वर्ष पहिले कालो हिरण शिकार गरेका आरोपमा जोधपुर अदालतमा ठूलो फैसला हुँदैछ । ५ अप्रिलमा अदालतले यो फैसला सुनाउँदैछ कि बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई जेल सजाय दिइनेछ वा अन्यलाई जेल सजाय ...
माया विश्वास हो, कसैका लागि केयर पनिः मोडल एलिना
एलिना कार्की पढाइका साथै कलाकारितामा भविश्य खोज्दैछिन् । केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी एलिनालाई याक्टिङको ठूलो शोख छ । सानैदेखि कलाकारितामा रुची भएकी एलिनालाई फेशन शो असाध्यै मनपर्छ । उनलाई सिम...
एजेन्सी । नायिका जेनिभर गार्नर र बेन एफ्लेकले सन् २००५ को जुनमा निकै हतारोमा लगनगाँठो कसेका थिए। उनीहरूको वैवाहिक समारोहमा दुवैपट्टिका अभिभावक उपस्थित थिएनन्। गोप्य विवाहको ६ महिना नबित्दै उनीहरूले प...
फिल्म बागी २ः टाइगरले तोडे आफ्नै रेकर्ड
काठमाडौं । बक्स अफिसमा फिल्म बागी २ ले आश्चर्यजनक तरिकाले चर्चा बटुलिरहेको छ । पहिलो दिनमा २५ करोड कमाएको फिल्मले मात्र चार दिनमा ८५ करोडको आंकडा छोएको छ । मार्च ३० मा रिलिज भएको टाइगर श्राफ र दिशा प...
बलिउडका चर्चित अभिनेताहरुको पहिलो कमाई कति थियो ?
एजेन्सी । बलिउडका कतिपय अभिनेताहरु धेरै संघर्ष गरेर आफ्नो अहिले भइरहेको यो स्थान बनाउन सफल भएका छन् । आफ्नो सपना पुरा गर्न उनीहरुले निकै मेहनत गरेका छन् । कामलाई ठूलो सानो नभनि अगाडि बढेका कारण अहिले ...
शिव परियारको ‘मात नलाग्ने रक्सी र हात नलाग्ने माया बोलको गीत सार्वजनिक
गायक शिव परियारले दर्शक तथा स्रोता सामू नया गीत लिएर आएका छन् । नेपाली सांगीतिक आकाशमा कयौं हिट गीत दिएका परियारले ‘मात नलाग्ने’’बोलको गीतका भिडियो आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । ...
गीतकार संघको अक्षयकोष स्थापना गर्न अमर बान्तुले गरे १५ लाख सहयोग
काठमाडौँ । गीतकार सङ्घ नेपालका आजीवन सदस्य कवि तथा गीतकार अमर बान्तु (अमर सिहं राई) ले गीतकार सङ्घको अक्षयकोष स्थापना गर्न १५ लाख प्रदान गरेका छन् । गीतकार सङ्घ नेपालको कार्यालय विजुलीवजारमा आयोजित का...
नेप्टेको आँखा छ चिम्रो” सार्वजनिक
बिहिबार, चैत्र १५, २०७४
प्रदर्शनको लागि तमतयार भएको सिनेमा नेप्टेको तेश्रो गीत आँखा छ चिम्रो सार्वजनिक भएको छ । ‘सुपारी काँचो’ र ‘दिल रानी’ बोलको गीतसँगै कमेडी ट्रेलरका कारण दर्शकमाझ प्रतिक्षीत बनेको फिल्मको यो गीतले पनि दर्...
अमृताको ‘गैरी गाऊँको मेला..’ सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौँ । गायिका अमृता श्रीपालको लोक दोहोरी म्युजिक भिडियो ‘गैरी गाऊँको मेला..’ सार्वजनिक भएको छ । भावना म्युजिक सोलुसनको प्रस्तुतीमा रहेका गीतमा अमृतालाई रञ्जित परियारले स्वरमा साथ दिएका छन् । ग...
‘भैरे’को नयाँ गीतमा सुरक्षा र दयाहाङ्गले गरे यस्तो नृत्य (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ। २०७५ को जेठ १८ गतेलाई रिलीज तय गरिएको चलचित्र ‘भैरे’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सार्वजनिक भएको ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ बोलको गीतले चर्चा बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले मंगलवार रा...
आईपीएलमा रणवीरको सानदार पर्फमेन्स, १५ मिनेटको करोडौं रुपैंया पाउँने
सोमवार, चैत्र १२, २०७४
काठमाडौं । ७ अप्रिल देखी सुरु हुन लागेको आईपिएल सिजन ११ को उद्घाटन समारोहमा बलिवुड स्टार रणवीर सिंहले पर्फमेन्स गर्ने भएका छन् । रोचक कुरा के छ भने १५ मिनेटको रणवीरको पर्फमेन्सलाई पाँच करोड रुपैंया प्...
गायक दिपक थापा मगरको “आत्महत्या” गीतको भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक दिपक थापा मगरको “आत्महत्या” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएकाे छ । मान्छेको जिवन पनि कतिपय अवस्थामा आफै देखी आफै हरेस खाँदो रहेछ । मृत्युलाई अगाँल्ने अवस्था सम्म मानिस पुग्दो रहेको छ । आफन...
‘नरसिम्हा’ च्यारिटी शो बाट उठेको रकम समाज सेवामा
मोनिका बस्नेतको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘नरसिम्हा’ सम्पूर्ण कार्य सकिएर प्रदर्शनको लागि तयार भएको छ । चलचित्रको बैशाख महिनामा काठमाडौँमा च्यारिटी शो गर्ने र त्यसको लगत्तै रौतहटमा च्यारिटी शो पश्चात मा...